Qadar oo mar kale loo caga-jugleeyay iyo liis argagixiso oo lala xiriiriyay – Kasmo Newspaper
Qadar oo mar kale loo caga-jugleeyay iyo liis argagixiso oo lala xiriiriyay
Updated - June 10, 2017 3:26 am GMT
London (Kasmo), Xiisaddii Dibolomaasiyadeed ee u dhexeysay Qadar iyo dalalka carbeed ee Sacuudigu horkacayo, Masar, UAE iyo Baxrayn, ayaa u muuqata mid ka sii daraysa hadda iyada oo ay soo baxayaan eedeymo cusub, ka dib markii horey loogu hanjabay Qadar.
Dalalkaas ayaa Jimcadii shaaciyay liis ay ku qoranyihiin 59 qofood iyo 14 urur oo fadhigoodu yahay Qadar, kuwaas oo dhammaantood lagu eedeynayo in ay maalgaliyaan argagixisada caalamka.
Liiska waxaa ku jira xubno ka tirsan qoyska Amiirka, sida Abdullah Bin Khalid Al-Thani, Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha iyo 3 urur oo samafal ah laguna xiriiriyo Dowladda Qadar. kuwaas oo lagu tuhunsanyahay in ay maalgaliyeen Xamaas iyo Al-Qaacida ilaa 2014kii, iyo xitaa Daacish. Waxaa kale oo ka mid ah Xajaj Al-Azmi oo reer Kuwait ah laakiin u badan Dooxa.
Dadka liiska ku jira oo reer Galbeedku su’aalaha ka qabaan waxaa ka mid ah Tarek Al-Zomor oo Masri ah oo horey xukun xabsi ugu soo dhammaystay dalkiisa, isagana haray gacan ka-hadalkii (violence), markii dambana u baxsaday Qadar, afgambigii Al-Sisi ka dib.
Waxaa kale oo ka mid ah Wadaadka Masriga ah ee dhalashada Qadar qaatay, Yusuf Al-Qardhawi oo lagu xiriiriyo Akhwaanul Muslimiin, kaas oo mararka qaar caro kala duldhaca Israel, laakiin loo arko wadaad wax wacdiya oo an argagixiso lug ku lahayn.
Waxaa kale oo liiska la shaaciyay ku jira shakhsiyaad iyo ururro masaafuris uga maqan Baxrayn, halkaas oo Shiicadu ka waddo kacdoon hoose oo ka horjeeda Boqortooyada Sunniga ah ee lagaga tirada badanyahay dalkaas.
Waa markii u horreysay oo Dowlado kale oo madaxbannaan si caddaan ah u eedeeyaan Qadar oo iaydu eedahaas ku sheegtay in ay yihiin qaar an sal iyo raad lahayn.
Dhanka kale Qadar ayaa ciidankeedii kala baxday is-bahaysiga dagaalka Yaman, waxayna qayb ahaan u wareejisay xuduudka ay la leedahay Sacuudi Carabiya, iyada oo ka baqaysa iska horimaad hubaysan.
Qadar ayaa ku xisaabtamaysa taageerada Turkiga iyada oo dhowaan Madaxweyne Erdogan saxiixay heshiis oggolaanaya in ciidammo Turki ah oo gaaraya 15,000 la gayn karo Qadar, si looga difaaco weerarro dibadda uga yimaada.